ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေ(ရသေ့တောင် မဲဆန္ဒနယ်) က ၆. ၅. ၂၀၁၆ ရက်နေ့၌ တင်သွင်းသော အရေးကြီးအဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်က လွှတ်တော်သို့အသိပေးရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း | Pyithu Hluttaw
၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလ (၆) ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေက -
“ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် AA တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တို့ အကြား ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော တိုက်ပွဲများကြောင့် မိမိနေရပ်အား စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်လာနေကြသည့် စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအား ပြည်နယ်အစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရများ အနေဖြင့် လိုအပ်သောအကူအညီ အထောက်အပံ့များ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် အမြန်ဆုံး စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန် တိုက်တွန်းကြောင်း” အရေးကြီးအဆို တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
ယင်းအဆိုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ရှုလေ့လာတဲ့အခါ-
- ကျေးရွာသူ/သားများအား လမ်းပြများအဖြစ် ပေါ်တာစွဲခံရခြင်းတို့ရှိကြောင်း၊
- လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေက နိုင်ငံရေးကို အခြားနည်းဖြင့်ဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းရာမှ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊
- အပစ်အခတ်ရပ်စဲနိုင်ရေးအတွက် တိကျမှန်ကန်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်း ရေးကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုကြောင်း၊
- လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးကို ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းမှာ ပါဝင်လာနိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့လိုကြောင်း၊ ဖိတ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာ အင်အားကြီးတယ်၊ သေးတယ်၊ သက်တမ်းရင့်တယ်၊ နုတယ် စသည်ဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံဖို့ မဖြစ်သင့်ကြောင်း၊ အာဃာတနှင့်ဖြစ်စေ၊ စစ်ရေး အကျိုး အမြတ်ပေါ်မှာ အခြေခံပြီးဖြစ်စေ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ ဖယ်ချန်ထားခြင်းမလုပ်သင့်ကြောင်း၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု မူဘောင်ထဲမှာပဲ တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင် ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဒေသခံများ ဒုက္ခရောက်နေရခြင်းကို အဆုံးသတ်စေမယ့် ရေသောက်မြစ်ကတော့ (AA) တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကို ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းကို ဖိတ်ခေါ်ဖို့ပဲဖြစ်ကြောင်း စသည့်အချက်များကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ယင်းအချက်များမှာ အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ကန့်သတ်ချက်များဖြစ်သော-
- ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးနှင့် အချုပ်အခြာ အာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးကို ထိခိုက်သော အဆိုမဖြစ်စေရ၊
- လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ ဆုံးဖြတ်ပြီးသော ကိစ္စတစ်ရပ်နှင့် သဘောချင်း တူညီသည့် ကိစ္စ မပါရှိစေရ၊
- ဥက္ကဋ္ဌက ခွင့်မပြုရသေးမီ မည်သည့်အဆိုကိုမျှ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမပြုရ၊ တို့နှင့် ညီညွတ်ခြင်း မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ခွင့်ရအောင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တစ်ခုကို လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ပေးရမည်ဆိုပါက အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကလည်း ယခုကဲ့သို့ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်သို့ အဆိုတင်သွင်း၍ တောင်းဆိုလာ ပါလျှင် ပြည်ထောင်စု အရေးက ရင်လေးဖွယ်ရာဖြစ်ပါကြောင်း၊
ဒီအဆိုဟာ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ဆုံးဖြတ်ပြီးသော ကိစ္စရပ်နှင့် သဘောထားချင်း တူညီနေတာ တွေ့ရပါကြောင်း၊ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအတွက် နိုင်ငံတော်က အကူအညီ ပေးအပ်ရန် တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော်လည်း အဆိုတွင် ပါရှိသည့် ဆွေးနွေးချက်များတွင် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ခွင့်ပြုဖို့ လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ပေးရန်ဆိုတဲ့ အနှစ်သာရကို ဦးတည်တာတွေ့ရှိရကြောင်း၊
လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ခွင့်မပြုရသေးမီ အဆိုရှင် ဒေါ်ခင်စောဝေအနေဖြင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေပါ ကန့်သတ်ချက်ကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းခြင်းမရှိဘဲ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ မီဒီယာများကိုလည်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းတို့ကို ၉.၅.၂၀၁၆ ရက်နေ့ တွင် ဒေါ်ခင်စောဝေနှင့် ဦးဘရှိန် တို့အား ဥက္ကဋ္ဌ ရုံးခန်း၌တွေ့ပြီး ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒေါ်ခင်စောဝေက လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်များကို လုံးဝ ဖော်ပြခြင်း မပြုဘဲ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအတွက် နိုင်ငံတော်ကအကူအညီ ပေးအပ်ရန် တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို တင်သွင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အဆိုကို တင်သွင်းရန် လက်မခံခဲ့တဲ့အတွက် စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် အလွန်ဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရပါတယ်။ ANP ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဆက်လက် ကြိုးစားဖို့ နည်းလမ်းရှာဖွေ တိုင်ပင်နေကြပါတယ်။ အဓိကကတော့ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ အတွက် စေတနာရှင် ပြည်သူများက ဆက်လက် ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးပါရန် အရေးကြီး ပါကြောင်းဆိုပြီး ၎င်း၏ Facebook Account မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာပြည်သူများ နားလည်မှု လွဲမှားစေခြင်း၊ လွှတ်တော်ကို အထင်အမြင် လွဲစေခြင်း ဖြစ်စေပါတယ်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအတွက် နိုင်ငံတော်က အကူအညီပေးအပ်ရန်ကို မကူညီစေလို၍ မဟုတ်ပါ။ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များကို နိုင်ငံတော်ကအကူအညီပေးရန် ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ခွင့် ရဖို့အတွက် ဦးတည်တဲ့ ဆွေးနွေး ချက်ကို တွေ့ရှိရခြင်း၊ အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်းသော အထက်တွင် ရှင်းလင်းခဲ့သည့် ကန့်သတ်ချက် များနှင့် ညီညွတ်မှု မရှိခြင်းတို့ကို တွေ့ရှိရခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့် အဆိုတစ်ရပ်ကို လက်ခံခွင့်ပြုရန် သင့်။ မသင့် စဉ်းစားတဲ့အခါ နည်းဥပဒေ များနှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အဆိုတင်သွင်းပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုသည်ဟု သော်လည်းကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် များကို ဖောက်ဖျက်သည်ဟုသော် လည်းကောင်း လွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ ထိပါးစေသည် ဟုသော်လည်းကောင်း ယူဆလျှင် ယင်းအဆို သို့မဟုတ် အဆို၏ အစိတ်အပိုင်းကို ခွင့်မပြုရဆိုတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ခွင့်မပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ် ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် လွှတ်တော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးစေသော ရေးသားပြောဆိုမှုနှင့် လွှတ်တော် အတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို အထင်အမြင်မှားစေသော ရေးသားပြောဆိုမှုများအတွက် ရှောင်ကြဉ်ကြရန် အသိပေး ရှင်းလင်းတင်ပြပါတယ်။